Wasiirka Madaxtooyada oo markii ugu horreysay ka jawaabay inuu Toorri ku eryaday shaqaale la eryey | Berberanews.com
Home WARARKA Wasiirka Madaxtooyada oo markii ugu horreysay ka jawaabay inuu Toorri ku eryaday...
Wasiirka Madaxtooyada oo markii ugu horreysay ka jawaabay inuu Toorri ku eryaday shaqaale la eryey
Hargeysa-(Berberanews)- Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay eed muddo sannad iyo badh ka hor ah ay u jeediyeen qaar ka mid ahaa shaqaalaha Madaxtooyada oo shaqada laga eryey oo sheegay in Xirsi oo markaa ahaa Chief Of Cabinet-ka madaxtooyada uu Toorri (Middi) ku dhex eryaday qasriga.
Wasiir Xirsi waxa kale oo uu ka hadlay eedo ay masuuliyiin kala duwan isugu jiray Wasiirro iyo Maareeyaal Madaxweyne Axmed-Siilaanyo xilka ka qaaday u jeediyeen oo ay xilka qaadistooda ku sheegeen mid uu Wasiirka Madaxtooyadu ka dambeeyey, taasoo uu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin ee da shaqadooda ku fashilmay sabab uga dhigteen inay isaga is-qabteen.
Wasiirka Madaxtooyadu wuxu eedahaa kaga jawaabay su’aalo shalay lagu waydiiyey barnaamijka la yidhaahdo maqal-dadkaaga oo lagu qabto Wasaaradda Warfaafinta, isla markaana toddobaadba masuul dawladda ka tirsan lagu casuumo, kaasoo ay dadweynuhu fursad u helaan inay maalintaa si toos ah su’aalo uga weydiiyaan hawlihiisa shaqo iyo waxyaabaha ay tabayaan qaybaha bulshadu.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland oo la weydiiyey waxa ka jira eedaha ay u jeediyaan dadka shaqooyinka dawladda laga eryo oo had iyo jeer sheega inuu Xirsi ka dambeeyey erigooda iyo masuuliyiinta Xilalka uu Madaxweynuhu ka qaado, iyada oo dadkaa qaarkood sheegeen inuu Toorri madaxtooyada ku dhex eryaday, waxa ka jira iyo waxa uu kaga jawaabayo, waxa uu jidhi; “Jawaabta kaftan aan ka horreysiiyee, Waar Cidiyaguri ma jirine, Toorray iska dhe. Intaan aan kaftanka kaga gudbo, way dhacdaa oo waan arkay dad badan oo leh Xirsi-baa wax na yeelay iyo Xirsi baa wax naga qaaday, kaalintaan joogo ayaa leh oo ah qof waliba halka uu u soo arooro. Laakiin-se, marka laga hadlayo dadka caynkaa yidhi ma xaqiiqaa mise waa been? Walaal waa been.”
“Waxa-se jirta oo ah biyo-kama-dhibcaan inkasta oo bina-aadamku u badan yahay, gaar ahaan Soomaalidu guul-darrada ma aqbalaan, marku qofku guul-darraysto ma aqbalo ee sabab buu u doonaa. Qof kasta oo shaqadiisii ku guul-daraystay oo Madaxweynuhu xilka ka qaaday ma aqbalayo ee wuxu baadi doonayaa sabab, markaa mid yar oo ka sokeeya Madaxweynaha oo Xirsi la yidhaa-baa jooga oo kaasuun baa iga qaaday weeye.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirku.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali X. Xasan oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi; “Laakiin, ma jiro qof aan anigu xilka ka qaado ee Qaranka Madaxweynaha ayaa hoggaamiya, hoggaamintiisana la baran maayo oo dadka kuma cusba, waa laga yaabaa in anigu aan ku cusbaa, laakiin Madaxweynaha ayaa waxna magacaaba waxna xilka ka qaada. Laakiin canaanta, maagga iyo qardoofada goobtaan joogo ayaa leh oo irriddii la sii marayey baan joogaayoo ka sii galayaana wuu isii dhaafaa ka soo baxayaana wuu isoo maraa. Toorriyi ma taallo madaxtooyada, aniguna immika ma sito, dadka cabanayey mid ka mid ah ayuun baa dacaayaddaa yidhi. Waxaad dareemi karaysaa oo lagu soo dhigay Joornaallada qaar qoortayda oo qof cad oo middi sita, oo qof waliba uu arkayo inay qalad tahay, haddana waxaan is idhi iska dul-qaado waanan liqay, meeshaa leh, waxaanay ahayd waxyaabaha Maxkamadaha la isku hortaago.”
Previous articleXasan Ciise Jaamac oo Xukuumadda ku eedeeyey qaabka ay u waajahday wada-tashiga laga yeelanayo Shirka London
Next articleNuxurka kulan dhexmaray Madaxweynaha Somaliland iyo Wasiirka Iskaashiga Denmark